Baaritaan Amnesty International samaysay oo muujinaysa in maraykanka Duqayn ku laayay dad Shacab ah | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Baaritaan Amnesty International samaysay oo muujinaysa in maraykanka Duqayn ku laayay dad...
Baaritaan Amnesty International samaysay oo muujinaysa in maraykanka Duqayn ku laayay dad Shacab ah
Hay’adda u dooda xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International ayaa Mareykanka waxaa ay ku eedeysay in duqeymaha uu inta badan ka fuliyo deegaano kamid ah Soomaaliya ay waxyeelo kasoo gaarto dad rayid ah oo aan waxba galabsan.
War ay soo saartay Hay’adda ayaa lagu sheegay in baaritaano ay sameeyeen lagu ogaaday in saddex qof oo rayid ah lagu diley weerarradii 18-kii Maarso ka dhacay Koonfurta Soomaaliya inay ahaayeen kuwo aan dambi lahayn, inkasta oo Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ay sheegeen in raggaasi ahaayeen xag-jiriin ka tirsan Al-Shabaab.
Mareykanka ayaa kor u qaaday weerarada diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan “Drones” ka ka fuliyaan Soomaaliya sanadka 2019 ka, kuwaas oo ka dhan ah waxa uu ku sheegay inay yihiin dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida, iyo Daacish oo ku sugan Soomaaliya.
Laakiin Amnesty waxay sheegtay in dadka rayidka ahi ay ka mid ahaayeen dadka dhintay, iyaga oo sheegtey in ay diiwaan galisay in ka badan dhowr iyo toban kiis oo dad aan waxba galabsan lagu dilay weerarada cirka ee Mareykanka ka fuliyo Soomaaliya.
Kooxda xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah ayaa sheegtay in AFRICOM aysan soo bandhigin wax caddeyn ah oo lagu taageerayo qiimeyntooda seddexda nin ee lagu dilay duqeyntii Mareykanka ka fuliyay 18-kii Maarso koonfurta Soomaaliya inay ahaayeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Warbixin ay soo saartay hay’adda Amnesty International ayaa sidoo kale lagu sheegay in C / llaahi Xasan oo ah cilmi-baare Soomaaliya u qaabilsan Amnesty uu sheegay in Mareykanka uu u muuqdo mid aan ogeyn cidda duqeymaha cirka ah ka geysata Soomaaliya.
Ugu dambeyn Amnesty waxay sheegtay inay wareysi la yeelatay 11 qof oo goobjoog ka ahaa weerarkii 18-kii Maarso, oo ay ku jiraan kuwa la shaqeeya iyo qoyska ragga la dilay markii gaarigooda lagu dhuftay gobolka Shabeellaha Hoose,isla markaana ay u cadeeyeen in Eheladooda aysan xiriir la laheyn Al-Shabaab.
Warkaan kasoo yeeray Hay’adda u dooda xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International ee lagu eedeeyey duqeymaha uu Mareykanka ka fuliyo Soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli Mareykanka duqeymaha uu ka fuliyo Soomaaliya uu ku sheego in uu ku dilo Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Previous articleShirka Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya oo Moqdisho ka furmaya
Next articleWar ka soo baxay Caleema saarka Axmed Madoobe